निर्माण कार्यमा लापरवाही, लगाईयो बालुवाको पर्खाल, अब कारवाही कस्तो ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
निर्माण कार्यमा लापरवाही, लगाईयो बालुवाको पर्खाल, अब कारवाही कस्तो ?
सैघाली खबर, १९ जेठ।
ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने तथा निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शनिबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरसहितको अनुगमन टोलीले विकासको काममा अनियमितता भएको पाएपछि ३ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । विराटनगरको व्यस्त मानिने महेन्द्र चोकमा पक्की नाला बनाउने क्रममा गुणस्तरहीन काम भैरहेकोमा मेयर पराजुलीले भेटेका थिए । मेयरका प्रेस संयोजक कौशल निरौलाका अनुसार मेयर पराजुलीले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका हुन् ।
निर्माणको विषयमा कडाई गर्दा उल्टै मेयरमाथि नै थर्काउन थालेपछि उनीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । पक्राउ पर्नेमा टुण्डीरमण निर्माण सेवाका साइट प्रोजेक्ट मेनेजर रवि पन्तसहित सुपरभाइजर विनय साह र अर्का एक जनालाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको हो । अनुगमन टोलीले सिमेन्ट नै नमिसाई बालुवाले मात्र इँटा जोडिरहेको फेला पारेको थियो । त्यसको केही बेरमा नै उनीहरुलाई काम भइरहेको ठाउँबाट पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ लगिएको छ ।
साइटका ठेकेदार कृष्ण बोहोरा भने पक्राउ परेको छैनन् । महानगरले टुण्डिरमण निर्माण सेवाका ठेकेदार कृष्ण बोहरा, कम्पनीका मेनेजर रवि पन्त, सुपरभाइजरद्वय संजय रजक, विनय साह र सडक कार्यालयका सुपरभाइजर देवराज बराललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । पत्रको बोद्दार्थ व्यपारिक मार्ग विस्तार आयोजना सिक्स लेन सडक विभाग इटहरी सुनसरीलाई समेत पठाइएको छ ।
महानगरका प्रमुख पराजुलीले विकासको काममा चरम लापरबाही गरेको पाइएपछि प्रशासनिक कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत महेन्द्र चोकदेखि वरगाछीको भागमा गुणस्तरहिन काम भएको र काममा ढिलाई भएको कारण कारबाहीको सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ । कमसल सामान र गुणस्तरहीन काम गर्ने जो कोहीलाई नछाड्ने महानगरले जनाएको छ ।।